किन बेहाल छ टिचिङ हस्पिटल ? – Nepali Health
२०७५ माघ ८ गते ८:४२ मा प्रकाशित
शिशुलाई घाममा सुताएर तेल घस्न थालिन्। त्यही बेला फलाम काट्ने मेसिनको चर्को आवाज आयो। शिशु रुन थाल्यो। दिक्क मान्दै उनले भनिन्, ‘आमा चाहिँलाई पनि तेल लगाउनु पर्ने, यहाँ यस्तो बिचल्ली छ। खै कसरी लगाउने होला ?’
बालरोग विशेषज्ञ कमलराज शर्मा भन्छन्, ‘फलाम काटेको आवाज, गाडीको हर्न र स्पिकरको आवाजले नवजात शिशुलाई एकदमै नराम्रो असर पर्छ। श्रवण शक्तिमा तत्काल ह्रास आउने गर्छ।’ सुतिरहेको बच्चा आवाजले तर्सिएर उठ्दा उनीहरूको दिमागी विकासमा असर पर्ने उनको भनाइ छ। शिशु सुत्दा उनीहरुको हर्मोन विकास हुने उनले बताए। ‘शिशु सुत्न पाएनन् भने शारीरिक विकासमा समेत असर पर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘खराब धुलोले रगतमा संक्रमण, निमोनिया हुनुका साथै शिशुको मृत्युसमेत हुन सक्छ।’ अस्पतालका प्रशासनिक प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारी अस्पताललाई बाध्यता रहेको बताउँछन्। उनी कतिपय गर्भवतीले स्थान अभावका कारण ह्वीलचियरमै बच्चा जन्माउनु परेको उनको भनाइ छ। ‘भवन निर्माण भइरहेको छ। अन्त सार्न ठाउँ छैन। हामी बाध्य छौं। यो बाध्यता स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि भनिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने।
बिहान ११ बजे। बर्थिङ सेन्टरमा एक कर्मचारी सफा गर्दै थिइन्। आफ्नो काम सुरु नगर्दै उनी बर्बराउन थालिन्, ‘जति सफा गरे पनि हुँदैन। कति फोहोर गर्न सकेका ? ’ उनी कामभन्दा बढी रिसाउन थालिन्। त्यही बेला तातो सुप लिएर आइपुगे एकजना कुरुवा। कर्मचारीले उनीमाथि रिस पोखिन्। ‘सफा गर्न लागेको, आँखा देख्नुहुन्न रु ’ हातमा सुप लिएका कुरुवा अलमल परे। ‘सफा गरिनसकेसम्म कोही भित्र जाने होइन,’ उनले आदेशको लवजमा भनिन्। कुरुवा ढोकैमा कुरिरहे। १५ मिनेट बित्यो। सुत्केरी श्रीमतीलाई सुप ल्याएको भन्दै उनी अनुनय गरिरहन्थे। कर्मचारी सुन्दिनथिन्। सुप सेलायो। फेरि तातो सुप लिन कुरुवा क्यान्टिनतर्फ दौडिए।
बिहान ६ बजे टोकन खुल्छ। ८ः१५ बाट टिकट वितरण सुरु हुन्छ। टिचिङको परिसरमा बुधबार बिहान ६ बजे पुग्दा दुई-चार जना मात्रै आइपुगेका थिए। टिकट काउन्टर खुल्यो। टिकट दिनेले त्यसपछि कहाँ जाने स्पष्ट भनेनन्। एक बिरामीले आफ्नो उमेर ३० वर्ष बताए। तर टिकटमा देखियो ४० वर्ष। उनी अलमल भए। त्यसपछि सोध्न पुगे सहायता कक्षमा।
यो कक्ष बेलाबेलामा खाली हुने गर्छ। बिहान ८:३० बजे खाली थियो। आश्चर्य लाग्दो त के छ भने सहायता गर्न बसेकाहरू टिचिङका कर्मचारी होइनन्। एनजीओकर्मी हुन्। सहायता कक्षमा ‘बसुन्धारा हेल्पिङ ह्यान्ड्स’ का तीन कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरु कहिले युट्युबमा भिडियो हेरिरहेका हुन्छन्, कहिले फेसबुक चलाइरहेका हुन्छन्।
‘तपाईंहरुलाई टिचिङबारे सबै थाहा छ ? ’ एक जनाले सोधे। महिला एनजीओकर्मीले भनिन्, ‘यहाँ भित्रको सबै जानकारी लिएर बसेका हौं।’ एकजना वृद्धा त्यहाँ आइपुगिन्। उनले इन्डोस्कोपी गर्ने ठाउँ सोधिन्। ती एनजीओकर्मीले औंलाले इसारा गर्दै जानुपर्ने दिशा देखाइन्। उनले भनेकैतिर गइन् वृद्धा। तर भीडमा अलमलिइन्। ‘खै उता जा भन्छन्, कता हो कता ? ’ उनले सुस्केरा छोडिन्।
‘आम्मामा। निथु्रक्कै भिजेँ नि !’ एक महिला शौचालयबाट चिच्याउँदै बाहिरिइन्। धारा खोल्दा पानी उछिट्टिएर उनको लुगा झिज्यो। धाराको टुटी बिग्रिएर पानी बगिरहेको थियो। पाइपमा ठाउँठाउँमा प्वाल परेको छ। बिरामी र अन्य व्यक्ति सबैले एउटै शौचालय प्रयोग गर्छन्। अपांगमैत्री शौचालय छैन। पुरुष शौचालयमा जान बाध्य छन्, बिरामी महिला। प्रत्येक शौचालयमा भीड लाग्छ। सफा गर्ने कोही देखिएनन्। तर, ५ रुपैयाँ उठाउन भने ढोकैमा दुई जना बसिरहेका थिए। प्रशासन प्रमुख अधिकारी सरसफाइ गर्नुपर्ने भएकाले बाहिरका व्यक्तिलाई ठेक्कामा दिइएको स्वीकार्छन्।
बैंकका कर्मचारीले एउटै शीर्षकमा दुई पटक बिल काटिदिए। ‘एउटै उपचारको लागि दुई पटक पैसा तिर्नु पर्‍यो’, इन्डोस्कोपी विभागअगाडि विष्णुकुमारी राई (६५) हातमा दुईवटा बिल बोकेर गुनासो गर्दै थिइन्। उनले पुष २७ गते आधा घन्टाको फरकमा दुई पटक भिडियो एक्सरेका लागि पैसा तिरिन्। निरक्षर विष्णुकुमारी त्यसदिन एक्लै अस्पताल पुगेकी थिइन्। घरमा पुगेर छोराले बिल हेरेपछि मात्र आफू ठगिएका थाहा पाइन्। बुधबार पैसा फिर्ता लिन उनलाई दिनभरी लाग्यो। विष्णुकुमारीले भनिन्, ‘म ठगिएको रहेछु। थाहै भएन।’
स्वस्थ मुटु, स्वस्थ जीवन